Gbasara Anyị - GRX Ọrụ (HONG KONG) CO., LTD.
GRX akpịrị (ogologo KONG) CO., LTD.nọ n'okpuru Shenzhen GRX akpịrị (ogologo KONG) CO., LTD., Dongguan GRX akpịrị (ogologo KONG) CO., LTD., Dongguan Minxiang Hardware Plastic Co., Ltd. na tumadi aku mmepe na mmepụta nke ọla kọpa yg zipa pullers, dị iche iche zinc alloy Kporo, akpaka sere isi. Mgbazi ọla, zipa plastik, zipa nịịl, zipa a na-adịghị ahụ anya na zipa ndị ọzọ pụrụ iche, yana bọtịnụ alloy dị iche iche, nko, eriri belt, eriri akpụkpọ ụkwụ. Akpa, akpa na akwa uwe dịka ụghalaahịa. Mgbe ọtụtụ afọ nke mgbalị na mmawanye na-enweghị atụ, a na-etinye nkà na ụzụ ọhụrụ na àgwà ngwaahịa na nke mbụ.
Companylọ ọrụ ahụ ugbu a nwere ihe karịrị 80 nde square mita nke ụlọ ọrụ, ndị ọrụ 800, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọkachamara na-ahụ maka nkà na ụzụ na-emepe emepe n'ụlọ na mba ọzọ, na usoro njikwa jikọtara mmepụta, ọrụ, ahịa na ọrụ. The ngwa akporo anyị na-agụnye uwe, akpa, Akpụkpọ ụkwụ factory, mkpọchi uwe factory.
Ndị zipa na ngwaahịa ngwaike ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara gafere IS09001: 2000 sistemụ njikwa mma.
80 anwụ-mgbatị igwe, 200 nzukọ igwe, 200 punching igwe, 150 threading igwe, 20 injection ịkpụzi igwe.
Ngwaahịa na-exported niile n'akụkụ nke mba na Hong Kong, Macao, Taiwan, Europe, America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mba ndị ọzọ na mpaghara. Ya magburu onwe ya mma na mgbe-sales ọrụ meriwo ntụkwasị obi na otuto nke ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ. Nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi n'ụlọ na mba ofesi ileta anyị, anyị ga-enye gị ọrụ kacha mma.